Sunday July 19, 2015 - 17:34:57 in Wararka by Web Admin
Degmada Warshiikh waxa ay ka mid tahay Dagmooyinka Goblka Shabeelaha Dhaxe waxa ayna dhacdaa dhul ahaan Koofur Bari ee G/Shabeelaha Dhaxe. Waxa ay taariikh ahaan Degmada Caan ku tahay Faafinta Diinta Isalaamka iyo in ay tahay Xarun taariikh ku leh ba
Iyadoo laga duulayo ahmiyada ay leedahay isdhaxgalka bulshada ayuu durbadiiba waxa uu guddomiyaha Dagamada daah furay Tartanka Kubadda
Cagta ee Dagamada kaa soo ay ku tartamayaan afarta waaxood ee magaalada Warshiikh waxaan si aad ah u soo dhaweeyay qeebaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dagmada.
1. Amniga:- waxa uu sheegay Guddomiyaha in uu bil gudaheeda la keeni doono ciidan boolis ah oo ay leedahay dagamada kuwaasoo tababar siindoono ciidamo laga soo qoraayo deegaanka ka dibna si toos ah looga dhigaay boolis la wareego amniga dagmada iyo sidoo kale in ay goor dhaw howlgali doono taliskii Nabad sugiida ee Dagamada. Waxa uu kaloo sheegay in goor dhaw la dhisi doono saldhigii booliska dagamada oo casri ah kaa soo qeebweyn ka qaadan doono amniga dagmada.
2. Maamul wanaaga:- guddomiyaha cusub ee dagamada ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in uu maamulkiisa uu ku salaysnaan doono dowlad wanaag, sinaan, hufnaan, wada tashi iyo in maamulkiisa uu noqdo mid ay marwalba la xisaabtamaan bulshada dagamada.
3. Adeegyada Bulshada:- mar uu ka hadlaayay sida uu wax uga qabandoono adeegyada bulshada ee dagmada taasoo dadka dagamada ay baahiweyn u qabaan ayuu waxa uu balanqaaday in dib u habayn iyo balaarin lagu samayn doono xarumaha caafimaad ee ku yaala degamada sida xurumaha Hooyada iyo Dhallaanka. Waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in dib loo furi doono Dugsigii Hoose, Dhaxe & Sare ee Dagmada kaasoo shaqooyinkiisa hakada ay galeen waayahii danbe sidoo kale in wax barashada hoose lagu fidin doono ilaa heer tuulo oo laga hirgalin doono goobo waxbarasho.
4. Kaabayaasha Dhaqaalaha:- waxa uu sheegay guddoomiyaha in uu diyaarin doono barnaamij lagu dhisaayo jidka ka yimaada Deegaanka Ceelmacaan ee soo gala Dagamada kaasoo ay ka jirto dhibaato bacad ah oo ay dhib ku qabaan gaadiidka soo gala ama mara dagmada waxa uuna sheegay in la saari doono JAAY si KMG ah si ay u fuduaato isu socodka gaadiidka taasina ay qeeb ka qaadato koboca dhaqaale ee Dagamada. Waxa uu sidoo kale guddomiyaha balanqaaday in uu bilaabi doono mashruuc looga faa’iideesanaayo kheyraadka badda ee Dagamda kaa soo isugu jira Tababar kaluumaysi, Qaybinta Agabka kaluumaysiga iyo dhisida Suuq lagu iibiyo laguna keydiyo kaluunka taaso fursado shaqo abuur siin doonto dhalinyarada dagamada korna u qaadi doonto koboca dhaqaalaha ee dagamada.
5. Cadaalada:- Si loo xaqiijiyo garsoorka iyo cadaalada dagmada, waxa uu guddomiyaha cusub ee dagmada balanqaaday in goor dhaw la dhisi doono xaruntii maxkamadda Garsoorka ee Dagmada isagoo la kaashan doono maamulka heer gobol iyo hey’adaha caalamiga ah waxa ayna qeeyb ka gali doontaa nidaamka garsoorka ee dagmada kaa soo ah mid ka madaxbanaan hey’adaha fulinta ee Dowlada.